4WD Forklift Trucks Factory - China 4WD Forklift trucks Manufacturers, abanikezeli
I-WIK 4 ivili drive forklift iinkuphelostencils has a ngokusisigxina-wheel ezine drive, nto leyo iphucula kakhulu amandla forklift. Isithuthi sobunjineli esinokwenza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukuhambisa izinto, ukothula, ukuqokelela kunye nokuphatha ukusebenza kumhlaba ongalinganiyo njengodaka, amasimi kunye neentaba. Inentsebenzo elungileyo yendlela, yokupasa ukusebenza kunye nokuhamba kakuhle. Inokuthatha indawo yeziqhoboshelo ezahlukeneyo ukuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi. Izixhobo kulayishwa ukothula izinto ma ...
3.5TON 4WD Forklift Iilori
5TON 4WD Forklift Iilori
4TON 4WD Forklift Iilori
4.5TON 4WD Forklift Iilori
2.6TON 4WD Forklift Iilori